Argentina Kuzvimiririra Zuva - Zvaunoda Kuziva
Central & South America Ajendina
Argentina Kuzvimiririra - July 9
Argentina Kuzvimiririra Zuva ndeimwe yezvinhu zvakakosha zvikuru munyika uyewo chimwe chezvinofadza zvikuru. Iko kushushikana pamusoro pevatorwa vanopinda munharaunda yavo, madzinza ezvakabva iko zvino Argentina haana kuwedzera kugamuchirwa kune vekutanga veSpanish vachiuya kumahombekombe pamhenderekedzo yeRío de la Plata.
Pakutanga kwezana remakore rechi16, maIndia kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweArgentina ainge amisa vaInas vachiuya pamusoro pekufamba kubva kuBolivia.
Imwe yemigwagwa yaiva pamusoro pePuente del Inca.
MuSpain Juan de Solís akauya kumhenderekedzo yePlata muna 1516 uye akadzingwa nemaIndia, akabatwa uye akaurawa. Vashandi vake vakafamba nengarava uye muna 1520, Ferdinand de Magellan akamira paVafambi Yake Yose asi haana kuramba. Zvadaro, vose Sebastian Cabot naG Diego García vakafamba nemisidhari yeParaná neParaguay muna 1527 kuti vagadzire nzvimbo duku yainzi Sancti Spiritus . Vagari vemunharaunda vemunharaunda vakaparadza izvi kugadzirisa uye vese vatsvakurudzi vakadzokera kuSpain.
Vasingaregi, vaSpanish vakaedza zvakare. Panguva ino, Pedro de Mendoza akasvika muna 1536, ane simba guru rakapiwa zvakanaka nemichina nemabhiza. Asarudza nzvimbo yake zvakanaka, akatanga nharaunda yainzi Santa María del Buen Aire , inozivikanwa seBuenos Aires .
Zvisinei, vagari vomunharaunda vakanga vasina kufara naye kupfuura vavakidzani vake uye Mendoza vakadzokera kuSpain, vachisiya Juan de Ayolas naDomingo Martínez de Irala.
Uyu wechipiri akakwira rwizi kuti awane Asuncíon muParaguay uye akazounza avo vakapukunyuka kubva kuBuenos Aires kuenda kuAsuncíon. Ayolas akaenderera kuPeru, akambokundwa naPizarro, uye akarasikirwa nenyaya.
Verenga: 10 Zvinhu Zvausingagoni Kuona muBuenos Aires
Mukupera kwema1570 hondo kubva kuParaguay yakasimbisa Santa Fé muArgentina.
Musi wa11 Gumiguru 1580 Juan de Garay akatangazve kugadzirisa kuBuenos Aires. Pasi pomuchinda waGaray, Hernando Arias de Saavedra, Buenos Aires akatora midzi ndokutanga kubudirira.
Zvichakadaro, kune rumwe rutivi rwekondinendi, kufamba kunobva kuPeru neChile, vamwe kubva muna 1543, vakatevera migwagwa yakare yeInca kuenda kuArgentina ndokugadzira nzvimbo dziri kumabvazuva kwemaAndes. Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba , Salta, La Rioja neSan Salvador yaJujuy ndiyo maguta ekare eArgentina.
Nhau dzeFrench Revolution neAmerican Revolutionary War dzakasimudzira mazano ehurukuro pakati peLatin American intellectuals uye vezvematongerwo enyika. Kuvhiringidzwa kweRío de la Plata, yakasikwa muna 1776 uye yakapoteredza izvo zvino yava Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay uye chikamu cheBolivia, yakaparara apo Napoleon akapinda muSpain ndokuisa madzimambo, Ferdinand VII.
Guta rekufambisa reBuenos Aires rakagadzirisa chinangwa chakanaka kune vaBrithani, ikozvino vakapinda muPeninsular Wars muEurope. VaBrithani vakapinda muna 1806 zvakare muna 1807 uye vakanyadziswa. Kudzokorora simba guru renyika rakapa kuvimba kune masimba ehurumende akashandura mamiriro avo ezvematongerwe enyika.
Mushure mokunge vaFrance vatora simba kuSpain, vatengesi vapfumi muBuenos Aires ndivo vaiita basa rekufambisa musangano.
Musi wa25 Mbudzi 1810, cabildo yeBuenos Aires yakasunungura murwi ndokuzivisa kuti ichatonga nekuda kwaMambo Fernando VII. Guta racho rakagadzira junta uye rakakoka mamwe mapurisa kuti aende. Zvisinei, kusawirirana pakati pemapoka ezvematongerwo enyika kwakaderedza kupupura kwakasununguka kwekusununguka.
Apo hurukuro dzakatevera, mauto emashure akatungamirirwa naGavhuna José de San Martín muArgentina nedzimwe nyika dzeSouth America pakati pe1814 ne1817 vakaita rusununguko kubva kuSpain ichiwedzera kuitika.
Argentina Yuva Rokuzvimiririra - Nei Iri Rakarongerwa musi waJuly 9
Yakanga isiri kusvika munaMarch 1816, kutevera Napoleon kukundwa ku Waterloo, kuti vamiririri vemapurovhinzi akasiyana-siyana vakasangana muTucumán kuzokurukura ramangwana renyika yavo. Musi waJuly 9 nhume dzakasangana mumusha wemhuri yeBazán, iye zvino Casa Histórica de Independencia museum, kuzivisa kuzvimiririra kwavo kubva kutongi hweSpain nekuumbwa kweDunhu reUnited States reSouth America gare gare Provincesas Unidas del Río de la Plata .
Acta de Declaración de l'Independencia Argentina yasaina, musangano uchangobva kusimbwa hauna kugona kubvumirana nehuwandu hwehurumende. Vakagadza mutungamiri mukuru, asi nhume dzakawanda dzakasarudza hurumende yepamutemo. Vamwe vaida centralized republican system, asi vamwewo sangano rehurumende. Asingakwanisi kusvika kubvumirana, zvitendero zvinopesana zvakazopedzisira zvaita kuti pave nehondo yehurumende muna 1819.
Kutora simba, Juan Manuel de Rosas, akatonga kubva muna 1829 kusvika muna 1852 paaiita semutarisiri wekunze kwenyika yose, uyo akashaiwa chero humwe humwe hurumende yehurumende. Achibvumirwa sehutsinye, Rosas akakundwa nehutongi hwakatungamirirwa naGeneral Justo José de Urquiza uyo uyo Argentine kubatana kwenyika yakasimbiswa, uye mutemo wakabudiswa muna 1853.
Argentina Zuva Rokuzvimiririra ikozvino rinochengetwa July 9th.
Krisimasi muArgentina: Tsika Yaunofanira Kuziva
Top 10 Zvikonzero Zvokushanyira Argentina
Argentina Inopemberera Ushamwari Hwezuva - Dia Del Amigo - July 20 - Chikamu 2
Music Festivals muArgentina
Most Popular Popular Cities in Argentina
Inonyanya Kukurukurirana Mahofisi eAmerica muU.SA
Top Top Ten Things To Do In Puerto Vallarta, Mexico
Gore reKrisimasi Zviitiko muTampa Bay
Gay Honeymoon Spots USA
Spring Break Camp Ideas
Germany yeGentest Hotels
Nzira Dzapamusoro 5 Nzira dzeVafambi veSolo Kuti Vawane Ndekuda Kubvira
London kuCarlisle neTerezi, Bus, Car uye Air
Carnival Breeze - Tariro yeTheatre
Crystal City Maps: Arlington, Virginia
Atlanta Food Trucks uye Street Food
Southern Oregon Gay Pride muAshland